18th August, 2021 Wed ०९:३९:३३ मा प्रकाशित
सरकारले चालु अधिवेशन बन्द गरी हठातमा दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्र विरोधी कार्य हो । सरकार गठन भएको एक महिनामा संसदमा कुनै अध्यादेशमाथि छलफल भएन । सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउन सकेन । एमाले जुन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, त्यसलाई फुटाउन अध्यादेश ल्यायो । यो भन्दा निच अरू के हुन सक्छ ? यीहरूलाई अफगानिस्तानमा भएजस्तै सत्ता छोडेर भाग्ने स्थिति नभएसम्म चेत खुल्दैन । त्यस्तै स्थिति नेपालमा हुन आवश्यक छ ।
यो सरकार जनादेशबाट आएको भए पो जनहितका काम गर्छ । परमादेशबाट आएकाले के काम गर्छ ? अहिलेको सरकार र न्यायालयलाई देशको माटोसँग कुनै प्रेम छैन । विदेशी मालिकको चाकरी गर्न र विदेशीले दिएका सुखसुविधामा नै आनन्दित छन् । उनीहरूका छोराछोरी विदेशमै पढाउँछन् । उतैका नागरिक बनाउँछन् । देशको के माया गर्छन् । अब नेपाली जनताले नै यो देश बचाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अहिलेको परिस्थिति निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो गद्दारी माधव नेपालले गरेका छन् । उसले काँध नथापिदिएको भए मरिसकेको कांग्रेसको प्रेत आत्मा फर्किने थिएन । एमालेले यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन ।
एमालेलाई कमजोर बनाउन भारत, अमेरिकालगायत यहाँका अदालत, नागरिक समाज, मिडिया, बौद्धिक समाज सबै मिलेका छन् । अहिले नेपाल भगवान भरोसामा टिकिरहेको छ । कतिदिन टिकिरहने हो थाहा छैन् । यहाँका अदालत, बौद्धिक भनिएकाहरूलाई विदेशीले किनिसकेका छन् । यी देश बेचुवाहरूबाट केही आश गर्नु छैन ।
अहिले जतिपनि गतिविधि भइरहेको छ, एमालेलाई पत्तासाफ बनाउने उदेश्यले भएको छ । यी सबै विदेशीको इशारामा प्रचण्ड, देउवा, उपेन्द्र यादवले गरिरहेका छन् ।उनीहरूमा कुनै नैतिकता छैन । एउटा राजा फालेर स्वघोषित सयौं नयाँ राजा भएका छन् । त्यही राजा बन्ने दौडमा देशमा अस्थिरता मच्चाइरहेका छन् ।
एमाले दक्षिण एशियामै सबैभन्दा व्यवस्थित, संगठित र संस्कारी पार्टी हो । यो पार्टीमा माधव नेपाल जस्ता गद्दारी जन्मिनु दुर्भाग्य हो । नेपाललाई बेलैमा चिन्न सकेनन् । यस अघि ओलीले ल्याएको अध्यादेश जसपा नामको दक्षिणपन्थी पार्टीका नेताहरूको आग्रह ल्याइएको हो । त्यो गर्नु ठीक थियो वा थिएन जनताले मुल्याङ्न गर्लान् । तर त्यसकै कारणले ओली जी खाडलमा पर्यो भन्ने कुरा सत्य होइन । यहाँ विदेशीको एजेण्डा बोकेर थरीथरीका नेताहरू बसेका छन् । यिनीहरूलाई मातृभूमिको कुनै माया छैन । यी भनेका अपराधीहरू हुन् । यिनीहरू आफ्ना स्वार्थका लागि आफ्नै वंश नै सिध्याउन पछि पर्दैनन् । त्यसकारण यो देशमा विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको इशारामा ठुलै गम्भीर घटना घट्न सक्छ । यसमा सबै नेपालीहरू अत्यन्तै सजग र सर्तक हुन आवश्यक छ ।
(मण्डल नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हुन्)